Ejipta : Famintinana Ilay Hetsi-panoherana Revolisionera Andiany Faharoa Farany · Global Voices teny Malagasy
Ejipta : Famintinana Ilay Hetsi-panoherana Revolisionera Andiany Faharoa Farany
Voadika ny 04 Desambra 2011 10:09 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany manokana amin'ny lahatsoratray mikasika ny Revolisiona ao Ejipta 2011.
Alakamisy 24 Novambra 2011, ary tonga tamin'ny andro fahaenina amin'ny tsy fandriampahalemana ny ao Ejita : amin'ny 4.33 maraina izao eto Cairo renivohitra. Noeritreretina hoe ny kianja Tahrir, ao Ejipta, mba hiaina anaty filaminana ny alina. Kanefa ny fampiatoana ny tifitra rehetra izay natao teo amin'ny kianja Tahrir nandritra izay dimy andro izay dia narahina “Ha! Gotcha!”, na famoretana nahitam-bokany avy amin'ny polisy sy ny “Central Security Forces” (CSF).
@mfatta7 : Tsy najain'ny polisy ny fampiatoana ny fitifirana tao amin'ny làlana Mohamed Mahmoud. Tsy hijanona ireo tanora raha tsy tonga amin'ny fialan'ny ministry ny atitany.
Nianjera ilay saina fotsy voaloto ary entona vaovao indray no nitifirana ireo andiana mpanao fihetsiketsehana izay nanenika ny làlana maro samy hafa mitondra eny amin'ny kianja – Lalana Mohamed Mahmoud sy ny kianja Tahrir.
Ity lahatsary ity, nakarin'i TWorkx, mpampiasa YouTube ny 23 Novambra 2011, dia mampiseho ezaka fampiatoana ny fitifirana teo amin'ireo mpanao hetsi-panoherana sy ny ministry ny atitany :
Ao “Alexandrie”, ny korontana dia voafetra ihany ho amin'ny diabe eo amin'ny Maoske Al-Qaed Ibrahim sy ny tanàna manodidina an'i Smouha, izay honenan'ilay Tompon'andraikitry ny fandriampahalemana (Modereyet elAmn). Kanefa araka ny fahitana ny herisetra misy, farafahakeliny olona mpandalo tsy manan-tsiny iray no maty noho ny fifampitifirana.
@RawyaRageh : Fianakaviana milaza aminay fa tsy nanao hetsi-panoherana i Sherif, & nandalo teo fotsiny niaraka tamin'ny fianakaviany izy, tamin'izay fotoana izay no nahavoan'ny bala ny tendany#Alexandria #Egypt #Smouha
Amin'izao fotoana izao indrindra, ny isan'ireo olona maty ao Ejipta dia efa eo amin'ny 40 eo araka ny nambaran'ny Ministry ny Fahasalamana eto an-toerana, ary tsy ao anatin'izany isa izany ireo olona roa maty tany Ismailia ny alin'ny Alarobia. Raha jerena ny tatitra nalefa Twitter avy amin'ireo mpanao gazety teny an-toerana tao Alexandria sy tany amin'ny tanàna hafa, dia tsara ny milaza fa tsy mitombina io isan'olona maty io. Tsy mitsaha-mitombo ilay isa.
(hita ato ny lisitr'ireo niharam-pahavoazana tao Cairo irery fotsiny, ny Alarobia maraina. Inoana fa efa niakatra ny isan'izy ireo izao).
Ireo mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana tao Ismaïlia dia voalaza fa nihaona teo amin'ny misasakalin'ny Alarobia 23 novambra teo, araka ny nambaran'ity antso ombam-pihetseham-po ity [ar] izay ho an'i Al Jazeera dia misy iray maty farafahakely ao amin'ny hopitaly ao an-toerana.
Ireo mpanao fihetsiketsehana teny an-toerana koa dia nanamarina ilay faty olona :
@MostafaAmin84 : zazalahikely 15 taona no maty tao #Ismailia taorian'ny fanafihana nataon'ireo hery mitam-piadiana sy ny miaramila tao amin'ny kianja Al Mamar
Na dia izany aza, nisy lehilahy iray avy ao Ismailia naka horonantsary ny tenany nandeha fiara manerana ny tanàna mba hanaporofony fa ilay fanambarana mikasika ny fifandonana dia honohono ihany. Toa ohatry ny milamina ny zava-drehetra hita ao amin'ny horonantsariny :
Horonan-tsary nakarin'i DouWorld, mpampiasa Youtube, ny 23 Novambra.
Mandritra izany fotoana izany , ny vaovao milaza fa misy ny fifandonana ao Tahrir nandritra ny alina dia mbola mitohy ihany, satria ny CSF sy ny polisy hoy ilay fitantarana dia manohy ny fampifandimbiasany ny fisindany sy ny fanafihana ireo mpanao hetsi-panoherana Ejiptiana, izay torahan'izy ireo entona mandatsa-dranomaso sy entona simika hafa izay mbola tsy fanta-piaviana. Ny zavatra tokana mazava, dia ilay vokany manelingelina izay entin'ilay entona eo amin'ireo mpanao hetsi-panoherana.
Kanefa tsy fandatsahan-drà sy herisetra tsy hifankahitana daholo no ao. Ny tanora mpanao hetsi-panoherana dia namaly ireo propagandin'ny fahitalavim-panjakana izay milaza fa izy ireo dia olona tsy misy ilàna azy, tsy mahay afatsy ny manampy ny “tànana avy any ivelany” mba hamotika ny firenena, amin'ny fanatanterahana tsikelikely ny fangatahin'izy ireo.
Ilay mpilalao sarimihetsika Khaled Abol Naga, fantatra tamin'ny hetsika fanoherany ny fitondrana teo aloha nandritra ny revolisiona tamin'ny fanombohan'ity taona ity, dia nanangona ireto teboka manaraka ireto tao amin'ny bilaoginy tao anaty lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe, ‘manomboka izao, ny fangatahantsika dia tokony ho baiko‘ [ar].
Na dia dimy andro anio aza izao ny faharetan'ny herisetra ao Ejipta, ny olona dia manohy ny andavan'androm-piainany any ivelan'ny kianja Tahrir ary any amin'ny toerana mafampana hafa rehetra ao Ejipta.
Amin'izany, olona maro be no tezitra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay manakorontana ny filaminana amin'izao fifidianana parlemanta efa akaiky izay atao ny 28 Novambra izao.
Ny tohan-kevitra ara-bola koa dia zavatra iray miverimberina. Efa leo ny fahantrana sy ny zavatra ateraky ny hetsi-panoherana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny olona, toy izany koa ny fahafahany miasa sy mitady asa.
@Sandra_Rizk : @mosaaberizing Manana ny asako aho, tsy afaka ny hanohy hanimba an'i Ejipta toy izao aho ka handao ny asako..Mialatsiny aho noho izany.
Fanampin'izany, fanontaniana mitovy amin'izany no nipetraka – raha toa ny Filan-kevitra Ambonin'ny Hery Mitam-piadiana na ny “Supreme Council of Armed Forces” (SCAF) ka miala tanteraka, iza no hitondra ity firenena ity?
@Sandra_Rizk : @mosaaberizing Tsy tianareo hiala any ve ireo miaramila ireo ? Inona ny antony tokony hahatongavany hanampy anareo eo! Tsy azoko mihitsy ny zavatra ataonareo amin'ity firenentsika ity!
Ary farany, ny fanontaniana izay nahatonga ny fisavoritahana ho an'ny olona avy any ivelany momba ny vaovao ao Ejipta dia ny hoe : Maninona no ankehitriny ? Maninona ny olona no tsy niandry ny fifidianana, izay efa ho avy tsy misy herinandro akory?
Misy endrika iray amin'ity lahatsoratra ity lavalava kokoa navoaka ny Alakamisy 24 novambra 2011, ao amin'ny bilaogin'i Miran Hosny.
Ny hajian-tsary sy ny sary dia nampiseho ny fitokonan'ny mponina tao amin'ny kianja Tahrir, tao Cairo, Ejipta, avy amin'i Nameer Galal, copyright Demotix (25/11/11).